SME | SMES Consultant Lists
ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင် သည့်ပညာရှင်အမည် (Resource Person)
ရာထူး/ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း
ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့်နယ်ပယ်များ (Professional Field)
၁ ဦးစိန်သောင်းဦး ဒုဉက္ကဌမြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း (MFPEA) Food Safety အခြေခံသင်တန်း (GMP)များအတွက် ကူညီပါမည်။ Start-ups များ အတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းများဖြင့် လမ်းပြပံ့ပိုးပေးခြင်းတွင် ပါဝင်ပါမည်။
၂ ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဉီးစီးဌာန (DRI) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန SME လုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်နေသော တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် နည်းပညာများနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြံဉာဏ်များပေးရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
၃ ဒေါက်တာစိုးစိုးသန်း ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နည်းပညာအကြံပေး
၄ ဦးမျိုးမင်း Principle & Business Trainer PS Business School Business Plan, Monitoring and Result Management Board Coaching, Consulting
၅ ဦးတင်လင်း နည်းပညာအကြံပေး၊ Food Science and Technology Association တီထွင်ဆန်းသစ်သော နည်းပညာများ၊
၆ ဦးသုတအောင် Hamsahub Business Consultancy Service All Subjects, Chat Bot Building Monitoring and Measurement Record Board Venture Capital Angel Investor IT နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခြင်း၊
၇ ဦးစိုးဟိန်း Founder SMEBi Strategic Management: Strategic Management is to strengthen the competitive position ofacompany through focusing on fostering innovation and increasing operational efficiency. In turn, is done through planning and precise execution of long term vision in various areas from corporate strategy to sales & marketing, from investment to change management, and digital transformation to operations. Startup Strategy: Market entry and growth strategies aim to evaluate current markets, in which businesses operate, and explore new ways for startup business to grow, develop their points of differentiation and strengthen their competitive advantage. Startup Strategy Consulting to potential new geraphical market to enter, new customer segment to serve and current processes that can be improved to accelerate growth.
၈ ဦးထွန်းနိုင်လင်း TNL marketing Training, Consulting and Coaching Services, Guerrilla Marketing Coach Marketing Management Business Management (Administrative) Business Plan Support to Local SMEs and ASEAN Program Facebook Messenger Bot
၉ ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည်၊ ဒေါ်တင်ဆွေအေး FoSTA (Myanmar) တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် နည်းပညာများ၊ Food Safety start-up, ongoing GMP,
၁၀ ဒေါ်သော်တာထွေး Productivity License Consultant, JPC ASEAN- SME Program Mentoring Business Plan Creation and Pitching Innovation and Marketing Finance Planning Local Incubation Center Project, Coaching/ Mentoring for Start-up Consulting/ Business Plan Creation Marketing Product Innovation Business Evaluation/ Reporting Local SME Training Program States and Regional SMEs Training Program Field Trip- Observation/ Evaluation Coaching for SMEs
၁၁ ဒေါ်စန္ဒာမျိုး ချင်းပြည်နယ် SME Agency အဖွဲ့ဝင်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်း Business Development Director Victory Garden Limited & Operating Director EMPOWER Consultancy Limited သစ်သီးဝလံဆိုင်ရာ Agri-business Marketing and Trade Promotion Networking
၁၂ ဦးဟန်မြင့်မောင် Mentoring Head of Myanmar Business Executives Association Over all Course, ASEAN SME Program, Mentoring, Business Plan Writing, Human Resource Management, Marketing
၁၃ ဒေါ်မင်းမင်းမဉ္ဇူ General Secretary Myanmar Business Executive Association Over all Course, ASEAN SME Program, Mentoring, Business Plan Writing, Human Resource Management, Marketing
၁၄ ဒေါ်နွေးနွေးစိုး Director of Business Development/ AGM Travels and Tours and Head of Marketing/ Panna Online School Marketing, Business Planning, Business Development
၁၅ ဦးနေဇော်ထွန်း ဒါရိုက်တာ ၊ Time Business Services Co., Ltd. အစပျိုးလုပ်ငန်းများ (Startup) စီးပွားရေးအကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် (Business Plan) အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဥ် (GMP) အခြေခံသဘောတရားများ အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း ၊ အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေး (Food Safety) အခြေခံသဘောတရားများ အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်း။
၁၆ ဦးအာကာစိုးနွယ် Director Green Myanmar Innovative Group MRPPA အဖွဲ့ဝင် 5S Training Business Plan
၁၇ ဦးလှမြင့် Myanmar Rubber Planters and Producer Association (MRPPA) 5S Training for Rubber Factory
၁၈ ဦးအောင်နိုင်လင်း Web Developer and IT Trainer Myanmar Online Services Co. ltd Web Development Services IT and Related Service, Web Development Services, Hosting Services Domain (International and local) Email Service (with Own Domain Name)
၁၉ ဒေါ်စိမ်းဝတ်ရည် Business Trainer, PS Business School Business Plan, Monitoring and Result Management Board Coaching, Consulting
၂၀ ဒေါက်တာမေပြည့်စုံကြွယ်၊ ဒေါ်မေစိုပြည်ဉာဏ်၊ ဦးမင်းဟန်ထွန်း Principal & Founder Matrix Institute of Professionals GIZ Licensed Trainer SME Financial Literacy,Loan application and Loan Readiness Access to Finance MSME Financial Management SME Financial Advisory
၂၁ ဦးလင်းလင်းဖြိုး၊ ဒေါ်သန္တာအောင် President Training Director Corporate Learning Institute (CLT) Business Plan Human, Resource Management, Marketing, Human Resource Consultancy Service
၂၂ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မျိုး Business Planning and Management Consultant EMPOWER Consultancy Limited Business Planning, Business Management, Financial Management, Coach and Mentor to SMEs အထူးသဖြင့် ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ကယားရှိ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်
၂၃ ဒေါ်နန္ဒာလှိုင် Director of Acasia Bagan Business Plan Financing/Financial Management Monitoring and Result Management Board Coaching, Consulting, Networking and Mentoring for Start-up
၂၄ WSH Myanmar WSH Myanmar MSME များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ကိုဗစ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများ
၂၅ ဦးမျိုးမြဆွေထွန်း Founder, DIKA Company Limited Consulting Meeting (Tax, Legal, Share, Contract, Partnership Financial) Small & Medium Biz Size), Valuation Report, Financial Model, Financial Structure, Contract, Notice, Legal Announcement in Newspaper, Accounting Structure, Organization Restructure, Board Advisor, Banl Loan, Home Loan, SME Loan, Covid Loan
၂၆ ဦးဝေယံ CEO, Nay La D Par Co.,Ltd Business Development, Business Management, Human Resources Management & Development, Strategic Marketing & Planning, Professional Sale,Customer Relationship Management & Strategic CRM Planning, Corporate Training for Soft skills, Entrepreneurship Training and Coaching, SME Development & Strategic Development Planning, Hospitality Consultant, Coaching and Training (Hotels & Tourism), Retail Management and Coaching